रेनकोटमा शिक्षक छातामा विद्यार्थी, अनि समृद्धि? « Pariwartan Khabar
यो एकाइसौं शताब्दी, अब सबै कुराहरु डिजिटलाइज हुँदै गएका छन् ।
त्योसँगैं धेरै डिजिटलाइज हुनेमा शिक्षा पनि एक हो । र, यो हुन पनि आवश्यक छ । नेटवकिङ सिस्टमबाट विद्यार्थीहरुलाई प्रतिक्षण गर्ने जमाना हो यो । विद्यार्थीहरुको हातहातमा ल्यापटप हुन जरुरी छ । कक्षाकोठामा प्रोजेक्टर प्रयोग गर्नु समयसापेक्ष हुन्छ । यसले शिक्षक विद्यार्थी दुबैलाई फाइदा गराउँछ ।
तर, सबैतिर शिक्षा डिजिटलाइज हुँदै जाँदा उता दैलेखमा भने पठनपाठनको लागि राम्रो कक्षाकोठासमेत उपलब्ध छैन ।
दैलेखको गुराँस गाउँपालिका ८ मा रहेको मालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयसँग भने प्रोजेक्टर, ल्यापटपको कुरा त परै जाओस् एउटा बसेर पढ्न मिल्ने खालको कक्षाकोठासमेत छैन ।
विद्यालयको कक्षाकोठामा शिक्षक रेनकोट र विद्यार्थीहरु छाताको सहारामा पढिरहेका हुन्छन् ।
वि.स. २०५६ सालमा बनेको ८ कोठे भवनको मर्मत सम्भार नहुँदा र नयाँ भवनको निर्माणमा ढिलाई भएको कारण यो समस्या झेलिरहनुपर्ने त्यहाँका सरोकारावालाहरु बताउँछन् ।
इन्डियन एम्बेसीको सहयोगमा विगत ६ वर्षदेखि निर्माणाधिन रहेको १२ कोठे भवन अझैसम्म नबन्दा यो समस्या आएको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वली बताउँछन् ।
१२ कोठे भवन छिट्टो नबन्दाको विद्यार्थी शिक्षकको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै गाउँपालिकाले चालू आवबाट ८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको पनि अध्यक्ष वलीले परिवर्तन खबरलाई बताए ।
अब भने छिट्टो बन्नेमा उनी विश्वस्त पनि छन् ।
“अहिले विद्यालय छुट्टी छ । अब फेरि विद्यालय खुल्दासम्ममा हामीले विद्यार्थीहरु बसेर पढ्न मिल्ने खालको भवन बनाइसक्छौं ।” अध्यक्ष वलीले भने ।
वि.स. २०७० सालबाट ३ वर्षको अल्टिमेटमा सुरु भएको १२ कोठे भवन ६ वर्ष बितिसक्दा पनि नबन्दा यो समस्या आएको छ ।
भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माणाधिन १२ कोठे भवनको ठेक्का लिएको खानी निर्माण सेवाले भने दूतावासले वर्षमा १५ लाख मात्रै भुक्तानी दिएकाले त्यो रकम अनुसारको मात्रै काम हुँदा निर्माणमा ढिलाई भएको बताउँदै आएको छ ।
विगत ०५६ सालदेखि पढाई हुँदै आएको ८ कोठे भवन जिर्ण भएर हावाहुरीले धेरै चोटी उडाए पनि फेरि त्यही कक्षाकोठामा बसेर अध्यापन गराउनुपर्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक भक्तबहादुर बस्नेत बताउँछन् ।
“पानी पर्ने सम्भावना देखियो भने विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो । अब चाहिँ छिट्टै निर्माण हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।” उनले भने ।
कक्षा १२ सम्म पढाई हुने सो विद्यालयको अवस्था यस्तो नाजुक नहुनुपर्ने प्रधानाध्यापक बस्नेतको भनाइ छ ।
६ वर्ष पहिलेदेखि निर्माणको काम सुरु भएको सो भवन अझैसम्म नबन्दा बालबालिकाहरुको शिक्षा लिने अधिकारमा समेत खलल् पुगेको प्रधानाध्यापक बस्नेत बताउँछन् ।
‘यो भ्याकेशनदेखि चाहिँ केही सुधार होला, गाउँपालिकाले हाम्रो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हाम्रो लागि यो धेरै खुसीको कुरा बनेको छ ।’ प्रधानाध्यापक बस्नेतले परिवर्तन खबरसँग भने ।
विद्यालयमा राम्रो भवन बन्दै नै छ भनेर आफूहरुले भवन बनाउने सन्दर्भमा बजेट विनियोजन नगरेको विद्यालय अवस्थित वडा वडा नं ८ का वडाध्यक्ष पूर्ण बहादुर वली बताउँछन् ।
“तर, अस्ति मात्रै हामीले चालू आवबाट विद्यालयको लागि ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं । अब भने छिट्टै नै भवन तयार हुन्छ ।” उनले भने ।
शिक्षा भनेको मानिसको आधारभूत आवश्यक्ता हो । यसको अभावमा मानिसको जीवन बानरजस्तै हुन्छ ।
शिक्षाले मानिसलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ डोर्याउँन मदत गर्छ । शिक्षा ग्रहण गर्नु सबै बालबालिकाको अधिकार हो ।
विद्यार्थी भनेका भोलिका कर्णधार हुन् । उनीहरुलाई शिक्षाबाट टाढा नबनाऔं ।
कोहलपुरमा प्रहरीको गोली लागेर २ विद्यार्थी घाइते, हेलिकोप्टरमार्फत् काठमाडौं लाइदैँ